SQL Server & MS Access Design ho an'ny orinasa Marijuana sy Hemp
Cons - Fampandrosoana manokana
Raha tsy mizatra tsara ny tetik'asa fampandrosoana ianao dia mety TSY hahazo izay ilainao.
Raha manana kaodim-pananana novolavolain'ny mpamorona tokana ianao (ary tsy nanome antontan-taratasy izy), dia mety ho sarotra ny fanovana ny kaody efa misy.
Mora ampiasaina… Nahita rindrambaiko “tapaka” marobe natsangan'ireo mpampiasa herinaratra sy ny hafa aho… tonga tamin'ny fotoana tsy nahaizan'ny fahaizan'izy ireo (na fotoana hianarana) ilay asa,
Vahaolana Cloud Database
Nanjary nalaza kokoa ny vahaolana rahona, satria avelan'izy ireo hitantana ny angon-drakitra amin'ny Internet, mampiasa fitaovana maro, nefa tsy mila manome mpizara sns amin'ny orinasany eo an-toerana. Ny ankamaroan'ireo vahaolana ireo dia mitaky fanamboarana sy fandaharana sasany.
Vahaolana manokana momba ny fampandrosoana ny data
Na dia samy azo atao namboarina aza ny Access sy Excel, maro ireo orinasa madinidinika no misafidy ny handeha miaraka amina vahaolana momba ny tahiry, noho ny filàn'ny angon-drakitra sy ny fomba fitantanana, famakafakana ary fanaparitahana ny vaovao. Ny vahaolana manokana dia ahafahan'ny orinasa misafidy ny sehatra misy azy (tranokala, birao, finday, rehetra) ary ny angona backend (SQL Server, MySQL, sns)
Tombontsoa - Maninona no mampiasa MS Access
Haingana hamolavola endrika, tatitra ary fangatahana.
Microsoft nahitana mpamosavy maro hitarika ny famoronana endrika sy tatitra.
Mpanoratra tatitra tena tsara.
Tombontsoa - Fampandrosoana manokana
Mahazo izay tena tadiavinao ianao, afaka mihazakazaka amin'ny vahaolana amin'ny sehatra maro sy teknolojia marobe, miorina amin'ny famaritana anao. Manana mpiara-miasa ivelany ianao (ny DBA sy ny Programmer) miasa miaraka aminao hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra… izany no mampiavaka azy ireo.
Matetika aho nihaona tamin'ny olona mampiasa MS Excel ho an'ny fitantanana angona, ary na dia afaka miasa amin'ny lisitra kely sns, amin'ny ankapobeny aza dia tsy mifanaraka amin'ny fitazonana data.
Tombontsoa - Maninona no mampiasa MS Excel
Azo atao izany.
Ny fanadihadiana dia natsangana ho Excel.
Mora ny mitsitsy sy mizara.
Maharatsy - Maninona TSY Hampiasa MS Excel
Voafetra ny fahafaha-mampiasa multi-mpampiasa (eny, AZONAO atao ny mahazo olona maromaro hiditra amin'ilay rakitra mitovy indray mandeha, saingy amin'ny ankapobeny dia tsy hevitra tsara ny handraketana ireo olana fanidiana).
Mety ho sarotra ny mametraka endrika fidirana angon-drakitra tsy misy fahalalana tsara momba ny VBA (Visual Basic ho an'ny Applications). Ny data Storage dia tsy misaraka amin'ny kaody sy ny fanadihadiana.
Tsy dia mety loatra amin'ny fanolorana angona amin'ny tranokala (rehefa ampiasaina ho toy ny loharanom-pahalalana data, fa tsy rohy fampidinana fotsiny).